Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSanjeeb
Indawo yam ye-2bhk yi-100 yeemitha kude neNew Merine drive road, iPuri sea beach(imizuzu emi-2 yokuhamba). Ulwandle oludumileyo lwaseSwargadwar luhamba nje imizuzu eli-10. Ikufuphi neHotele Gajapati kwaye ingqongwe ziiHotele ezininzi. Unokufumana iindawo zokutyela ezilungileyo, iindawo zokuthenga, ulwandle olucocekileyo lolwandle olukufutshane. Itempile ye-Lord Jaggnath imi kumgama weekhilomitha ezi-2 ukusuka kwindlu. Ungonwabela ulwandle oluhle lwasePuri kunye nembonakalo yokuphuma kwelanga ukusuka kwifestile kunye neBalcony. Indawo yam ilawulwa ngumgcini we-Sabitry okhoyo kuzo zonke iimfuno zakho
Indawo yokuhlala kuphela ekufutshane nolwandle oluhle lweGolden Puri engqongwe ziiHotele ezininzi zeenkwenkwezi ezinjengeGopinath, Gajapati, Raj, Asin kunye neSUV Palace .Umbono wolwandle kunye nokuphuma kwelanga kwenza indawo yam ibe yodwa.
4.42 ·Izimvo eziyi-43
4.42 · Izimvo eziyi-43
Iindawo zokutyela ezininzi zikufuphi. Ecaleni kwekhaya lam, iHotele iGajapati kunye nendawo yokutyela ikhona. I-Auto stand iphambi kwendlu yam. Itempile yasePuri ISCON yimizuzu eyi-10 yokuhamba ukusuka kwindawo yam. Iimarike eziphambili zePuri kunye nonxweme olude luhamba nje imizuzu embalwa ukusuka endlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Sanjeeb
Banokunxibelelana nomnakekeli okhoyo ngalo lonke ixesha. Ndifumaneka kwifowuni okanye kuWhatsApp ngalo lonke ixesha ngayo nayiphi na imibuzo okanye uncedo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Puri